စကားဝှက်များနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဘဝများ | Digital Tea House
စကားဝှက်များဟာ Englsih ဘာသာစကားတစ်ခုတည်းဖြင့်သာအသုံးပြုရသည့်အတွက်အက္ခရာများ သာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ချေစကားလုံး ၂၆ လုံးသာရှိသည့်အတွက် ခန့်မှန်းရ၊တွက်ချက်ရလွယ်ကူပါသည်။ ဒါကြောင့် စကားဝှက်ထားရာမှာ ကိုယ်တိုင်လည်း မမေ့နိုင် ၊ အားလည်းကောင်းတဲ့စကားဝှက်တွေကိုဖန်တီး သင့်ပါတယ်။
စကားဝှက်များဟာ ရှုပ်ထွေးရပါမယ်၊ ရှည်လျားရပါမယ်၊ ခက်ခဲရပါမယ်။ သို့သော် လက်တွေ့အသုံး တည့်ပြီး မှတ်မိနိုင်ရပါမယ်၊ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကင်းရပါမယ်၊ ။ ဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံရင်တော့ အားကောင်းပြီးစိတ်ချရတဲ့ စကားဝှက်တစ်ခုကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။အက္ခရာများကို အကြီးအသေး ပြောင်းလဲ အသုံးပြုခြင်း၊ ဂဏန်းနှင့်သင်္ကေတများထည့်သွင်းခြင်းက စကားဝှက်ကို ရှုပ်ထွေး၊ ရှည်လျားပြီး Brute Force Attack လို့ခေါ်တဲ့ စကားဝှက်များအား တွက်ချက်ခန့်မှန်းသည့်တိုက်ခိုက်မှုများအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေစကားလုံးများကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်းဖြင့်ပိုမို လုံခြုံစေပါတယ်။ အောက်ပါလင့်မှာ ဝင်ပြီးတော့ မိမိရဲ့ password တွေကိုရိုက်ထည့်ပြီး Brute Force Attack တွေအနေနဲ့ ဘယ်လောက်အချိန်ယူပြီး တွက်ယူရမယ်ဆိုတာကို စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
မိမိမွေးနေ့ (သို့မဟုတ်) မှတ်ပုံတင်နံပါတ် တွေကို စကားဝှက်အဖြစ်ထားရှိခြင်းဟာ ခန့်မှန်းရလွယ်တဲ့ အတွက် အားကောင်းတဲ့ စကားဝှက်တွေ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ စကားဝှက်များကို မှတ်မိနိုင်အောင်လဲဖန်တီးထား သင့်ပါတယ်။ မှတ်စုစာအုပ်၊မိမိ၏ ဖုန်းမှတ်စုများထဲတွင် စကားဝှက်များကိုချရေးထားခြင်းကလဲ အန္တရာယ်များ တာကြောင့် မိမိကသာသိသည့်စကားလုံး ပြောင်းလဲမှုမျိုး ပြုလုပ်ပြီးမှချရေးသင့်ပါတယ်။
စကားဝှက်များကို ပုံမှန်ပြောင်းလဲပေးနေသင့်ပါတယ်။ မတူတဲ့အကောင့်များစွာကို စကားဝှက် တစ်မျိုးတည်းဖြင့်အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ စကားဝှက်မျှဝေသုံးစွဲခြင်းကလည်း မိမိလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
စကားဝှက်များအားကောင်းအောင်ဖန်တီးရာတွင်နည်းလမ်း ၄ ခုရှိပါတယ်။
English မှ English သို့
စကားဝှက်များကို English ဘာသာဖြင့်သာထားနိုင်သည့်အတွက် ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ စကားဝှက်တစ်ခုဖန်တီးဖို့ဆိုရင် စကားလုံးတွေကို အကြီးအသေးပြောင်းလဲခြင်း၊ အက္ခရာများကို ဂဏန်းများ၊ သင်္ကေတများပြောင်းလဲခြင်းက မှတ်မိနိုင်ပြီး လွယ်ကူပါတယ်။
I love my dog and it is cute.
ILMDAIIC > I-L-M-D-A-I-I-C > 1-l-M-d-@-!-!-C
စကားဝှက်ထားရာမှာ မိမိစိတ်ကြိုက် တွဲစပ်မှတ်သားပြီးထားနိုင်ပါတယ်။ Space bar ဟာလဲ စကားဝှက်ဖန်တီးရာမှာ ထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။
Myanmar မှ English သို့
ဒီနည်းလမ်းကတော့ မြန်မာစကားလုံးများကို စိတ်ကပုံဖော်ပြီး English စကားလုံးများအစားထိုးရိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းမှာဖြစ်ဖြစ်၊ လပ်တော့ မှာဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး စကားဝှက်ကို မြန်မာလိုအနီးစပ်ဆုံးထားနိုင်တဲ့နည်းပါဘဲ။
ဥပမာ - မြမြစာဖတ်နေသည်။
မြန်မာစကားလုံးများအစား English စကားလုံးများအစားထိုးရိုက်သည့်အခါ ထိုစာကြောင်းကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ - Mya-mya-sar-phat-nay-thi
ထိုမှတစ်ဆင့် English မှ Englsih ပြောင်းနည်းကိုလဲ ထပ်ဆင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းစာသားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို စကားဝှက်အဖြစ်သုံးခြင်းကလည်း မှတ်မိလွယ်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါဘဲ။ သီချင်းစာသားများကို စကားလုံးများဖလှယ်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ -
WWWWRC > 4-W-R-c-.
မြန်မာသီချင်းများကိုလည်း Myanmar မှ English သို့ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
စကားဝှက်နှင့် စကားစုဝှက်စာဟာ ကွာခြားပါတယ်။ စကားဝှက်တွင် စကားလုံးများပါဝင်ပြီး စကားစုဝှက်စာကတော့ စကားလုံးအစုအဝေးတစ်ခုလုံးကို ဝှက်စာအဖြစ်သုံးခြင်းဖြစ်သည်။ စကားစုဟာ ကြိုက်သည့် စကားစုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမှတ်တရ စကားစု၊ အသံထွက်လွယ်ကူသည့်စကားစု၊ စကားပုံတစ်ခုခုလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Pabadi pabadi boo > p@8@d!-p@8@d!-800
Jelly pinky Molly Lolipop > j3LLy-d!2kY-m0LLy-l0L!d0d
Time and tide wait for no man. > T!m3-&-t!p3-w@!t-F0R-20-m@2
နှစ်သက်ရာစကားစုများကို စကားလုံးဖလှယ်အသုံးပြုခြင်း၊ သင်္ကေတများထည့်သွင်းပြောင်းလဲခြင်းတို့ဖြင့် အားကောင်းတဲ့ စကားဝှက်များကို ရနိုင်ပါတယ်။ လုံခြုံသော password များဖန်တီးအသုံးပြုပြီး မိမိ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်လုံခြုံရေးစနစ်ကိုမြှင့်တင်လိုက်ပါ။
လှမော်သည် ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် လကုန်ရက်တွင် ငွေပိုရှိ၍လလယ်ရက်များတွင်တော့ ငွေအများအပြားမရှိပေ။ လှမော်သည် ဥပဒေနဲ့အညီနေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သို့သော်လှမော်သည် ညတိုင်း လုံခြုံစွာခြံတံခါးသော့မခတ်ပဲ အိပ်သည့်ညမရှိပေ။ လှမော်သည် သူ၏လုံခြုံရေးကိုအလေးထားသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။သူသည် မည့်သည့်အချိန်မဆို မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သော့ခတ်သည်။ဆိုလိုသည်မှာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် မကောင်းသောကိစ္စရပ်များလုပ်ဆောင်နေမှ သာ သော့ခတ်သင့်သည်မဟုတ်။ မိမိ၏လုံခြုံရေးအတွက် မိမိအိမ်၏တံခါးကိုသော့ခတ်ထားသင့်သည်။ ထို့အတူ မိမိ၏ phone , Laptop နှင့် Electronic Device များတွင်လည်းမိမိ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက် အလက်များလုံခြုံမှုရှိစေရန် Password ထားသင့်သည်။